Guri - Insights
Cunug kasta iyo qof kasta oo dhalinyaro ah wuxuu xaq u leeyahay inuu helo iskuul waxtar leh.
Baahida bulshada, shucuurta iyo caafimaadka maskaxda waxaa lagaga gudbi karaa iyadoo la adeegsanayo is-dhexgal, loo wada dhan yahay iyo barnaamij waxbarasho shaqsiyeed cusub.
La shaqeynta iskaashiga bulshada inteeda kale waxay kobcineysaa khibrada ardayda / ardayda.
Manhajkeennu wuxuu taageeraa ardayda ‘ardayda’ si ay u noqdaan bartayaal guuleysta, muwaadiniin mas’uul ah iyo caafimaad qab, dhalinyaro kalsooni leh oo waxtar u leh bulshada.
Khibrad wanaagsan oo loo dhan yahay oo iskuulka ka mid ah ayaa ka qayb qaadata wanaagga ardayda iyo natiijooyinka nolosha wanaagsan.
Ardaydeenu waxay xaq u leeyihiin inay taageeraan oo ay hagaan koox daacad ah oo xirfad iyo xirfad leh.
Eeg Dalxiis Dugsiga ah